Taabit “Awooddu waa dab oo kale, waad ku baacin kartaa dadka kale waqti gaaban, balse…” – AfmoNews
Taabit “Awooddu waa dab oo kale, waad ku baacin kartaa dadka kale waqti gaaban, balse…”
Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir ahaana Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa farriin u muuqatay digniin iyo talo u diray Madaxda dowladda, xilli uu soo baxayo muran ka taagan Guddiyadii doorasho ee dhowaan la magacaabay.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu sheegay in Qatarta ugu weyn ee ummad soo wajaha ay tahay hoggaan aan waxba u tureyn.
Halkan hoose ka akhriso farriinta Taabit Cabdi:-
Qatarta ugu weyn ee ummad iyo qarankooda soo wajaha waa hoggaan aan waxba u tureyn.
Waa sida ay wax u socdaan maanta, mar haddii maamulkii dowladnimo sii noqonayo mar hadii aan helay waxba dhowran maayo.
Awooddu waa dab oo kale, waad ku baacin kartaa dadka kale waqti gaaban, balse ogow dabka adiga ayaa gacanta ku haya, haddaanan lagaa qabanna waa adiga cidda ugu horeysa ee ku gubaneysa, haarta ugu weynna uu ku reebayo.
Waxaan ku talineynaa in caqligu shaqeeyo, oo dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada rajada ka qaba loola dhaqmin maxaa iiga lumaya. #Dalka iyo #Dadka ha loo turo.